अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलार्इ डा. भट्टरार्इलार्इ पनि बाँकी राखेनन् यस्तो गर्न.. (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > प्रवास > अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूलार्इ डा. भट्टरार्इलार्इ पनि बाँकी राखेनन् यस्तो गर्न.. (भिडियो)
काठमाडौँ – अमेरिका भ्रमणमा रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकाको टेक्सास पुगेका डा. भट्टराई विरुद्ध त्यहाँ रहेका नेपालीले कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
डिसी मेट्रो एरियाबाट टेक्सास गएका डा. भट्टराई र उनकी श्रीमती तथा नेतृ हिसिला यमी विरुद्ध तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।डा. भट्टराई गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका हुन् ।